Toerana filokana an-tserasera an-tserasera Austrian - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
(500 vato, average: 5.00 avy tany 5)
Loading ... Ara-dalàna ny filokana any Aotrisy. Ankoatr'izay, nandritra ny taona maro dia niloka tamin'ny fidiram-bolan'ny firenena io. Ny karazana filokana rehetra any Aotrisy dia fehezin'ny Minisitry ny Finansy federaly (Bundesministerium für Finanzen). Androany dia misy kasino 12 miorina amin'ny tany. Ny mpitsidika dia omena kilalao isan-karazany, ao anatin'izany ny roulette, poker, blackjack, machine slot miaraka amin'ny jackpot mandroso sy ny fialamboly filokana hafa.
Ny fametrahana filokana malaza indrindra any Aostralia dia ny Casino, miorina amin'ny tranon'ny hotely Grand Hotel de l'Europe. Ny trano fandraisam-bahiny mihitsy dia naorina tamin'ny 1907, ary ny trano filokana rehefa nisokatra ho an'ny besinimaro nanomboka ny taona 1984 ary manana velarana 600 metatra toradroa. Satria i Austria dia toeram-pialantsasatra malaza eo amin'ireo mpizahatany, ny ankamaroan'ny trano filokana dia miorina akaikin'ny hotely. Mariho fa ny trano filalaovana eto amin'ity firenena ity dia tsy mandeha amin'ny famantaranandro. Misokatra amin'ny mpitsidika izy ireo manomboka amin'ny 18:00 na 19:00.
Gambling an-tserasera ao Aotrisy
Ny filokana amin'ny Internet dia manana tantara lava eto amin'ity firenena ity. Ny tranonkala filokana an-tserasera sasany any Aostralia any Eropa no anisan'ny mahazo tombony be indrindra, na dia tsy miorina amin'ny faritry ny firenena ny foiben'izy ireo, toa ny Nosy Channel. Mariho ny casino an-tserasera Aostraliana Bvin (Bwin), izay mahazo alalana amin'ny firenena maro manerantany.
Ny lalànan'ny filokana amin'ny Internet any Aostralia koa dia mamela anao hanome fahazoan-dàlana ho an'ireo orinasa hafa misy ao amin'ny firenena, ny tanjon'izany - ny fananganana vavahady filokana vaovao amin'ny Internet. Na izany aza, misy ny fepetra iray - ireo mpiloka ao an-toerana ihany no manao ireo tranonkala ireo. Mandritra izany fotoana izany dia tsy misy famerana ny olan'ny lalao amin'ny vavahady iraisampirenena, afaka mampiasa malalaka tolotra tranokala vahiny i Austria sy ny mponina
Lisitry ny Top 10 aotrisianina Online Casino Sites
Ny site casino amin'ny Internet dia manaiky mpilalao avy any Aotrisy
Jereo ny lisitry ny tranokala an-tserasera izay manaiky mpilalao avy any Aostralia, ary manolotra kilalao avo lenta sy azo antoka. Eto ianao dia hahita fialamboly marobe avy amin'ny milina slot ka hatramin'ny lalao kasino mivantana amin'ny mpivarotra rindrambaiko malaza toy ny NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, sy ny maro hafa. Azonao atao koa ny mamaky ny hevitray momba ny tranokala an-tserasera, mba hahalalanao ny fampiroboroboana an-tserasera, bonus ary safidy fandoavam-bola tsara indrindra azon'ny mpilalao avy any Aostralia.
Alpes rakotra lanezy, farihy madio ary mozartkugel vatomamy mahafinaritra misy marzipan - izany rehetra izany sy ny maro hafa dia marika mampiavaka an'i Aostria. Ity firenena ity CasinoToplists dia mitsidika anao anio mba hahitana trano filokana sy klioban'ny lalao.
Tantaran'ny tantara sy ny jeografia an'i Aotrisy;
Austria - trano filokana sy filokana eto amin'ity firenena ity:
Azo alàlana ireo casinos mifototra amin'ny tany, izy ireo dia 12, misy ihany koa sambo miaraka amin'ny casinos an-tsambo;
Talohan'ny fakana an-tserasera ireo tranonkala vahiny misakana ny fandrarana;
Misy mpilatsaka an-tserasera ao amin'ny aterineto no eo an-toerana.
Ny casinos malaza indrindra any an-toerana any Aotrisy;
Toerana misy an'i Aostralia sy fohy ara-tantara
Ny governemanta federaly ary miaraka amin'izay ny repoblika parlementera dia anarana ofisialin'ny Repoblikan'i Austria. Ny fiantsoana voalohany azy dia tamin'ny taona 996 AD Austria dia eo afovoan'i Eropa. Ny tantaran'ny firenena dia mifamatotra akaiky amin'ny fanjakana federaly alemana any Bavaria - tamin'ny 1156 fotsiny dia nahaleo tena ilay repoblika. Tamin'ny fotoana iray tao amin'ny firenena dia nakambana tamin'ny Repoblika Tseky, Kroasia ary Hongria, ankoatran'ny tena sarotra ny manana fifandraisana amin'i Torkia, Frantsa ary mazava ho azy Alemana. Ny renivohitry ny firenena dia ny tanànan'i Wina. Taorian'ny nifaranan'ny ady lehibe faharoa dia nizara ho faritra 4 i Aotrisy satria i Alemana.
Casinos sy ny filokana ao Vienne
Ny fahazoan-dàlana voalohany amin'ny fananganana casino dia navoaka tamin'ny 1922, ary ny fananganana filokana voalohany dia navoaka tao Salzburg. Nanomboka teo dia be ny rano nivezivezy, saingy zavatra iray ihany no tsy miova - avela ny kasino any Austria. Izy io no fikambanana lehibe indrindra amin'ny "Casinos Austria", miasa ao ny trano filokana 12 ary misy fikambanana hafa mifanaraka amin'ny fitsipiky ny fihazonana.
Ka ny orinasa "Casinos Austria International" dia fantatra lavitra mihoatra ny faritry ny firenenan'izy ireo manokana: manana sampana any amin'ny 15 fanjakana izy ary eo am-pelatanany 57 ny filokana ankehitriny. Ankoatr'izay, ny orinasa dia namorona sehatra ahazoana tombony bebe kokoa amin'ny orinasa filokana: sambo misy kasino ao anaty sambo. Ny isan'izy ireo dia manakaiky haingana ny marika 100.
Manana fidiram-bola midadasika amin'ny vola an'arivony tapitrisa euro ity toe-tsain'ny governemanta manoloana ny filokana io.
Ireo casinos malaza indrindra any Aotrisy
Bad Gastein - tanàna atsimon'i Salzburg
Ao amin'ity tanàna ity dia misy iray amin'ireo trano filokana mirentirenty indrindra tsy eto Aotrisy ihany, fa koa manerana an'i Eropa. Any amin'ny tranon'ny Grand Hotel de l'Europe no misy azy, naorina tamin'ny fiandohan'ny taonjato XX. Matetika mampiasa trano filokana amin'ny fahafaha-miasa feno manomboka amin'ny 19:00, ary izay rehetra te hitsidika azy dia ilaina ny mitandrina ny kaody akanjo - tsy ekena eto ny akanjo sy ny fanatanjahan-tena. Miaraka aminy dia mila manana antontan-taratasy momba anao ianao. Ny zava-dehibe indrindra - ny fisian'ny sarinao sy ny taonanao mihoatra ny 18 taona. Ny tapakila fidirana dia mitentina 23 euro, azonao ireo mari-pamantarana nomen'ny Euro 25.
Ao amin'ity tanàna ity, ny casino «Casino Salzburg» dia miorina ao amin'ity lapan'i Schloss Klessheim ity, natsangana tamin'ny fomba fisainana rococo, izay mahasarika azy ihany. Ity toerana ity dia tsy hoe mitazona ny fahitana hitifitra fotsiny. Fidirana amin'ny trano vola aloa, miankina amin'ny ora sy ny zava-mitranga ao an-dapa ny sandany. Mety ho fikambanan'ny fampisehoana teatra na mpihira.
Ny tanànan'i Velden izay toeram-pialantsasatra dia malaza amin'ny filokana ihany koa, natsangana tamin'ny 1950. Fa satria ireo izay maniry ny hisambotra ny rambon'ny Fortune isan-taona dia mihamitombo, dia nitarina ny trano casino. Ny tranobe vaovao, nosokafana tamin'ny 1989, dia afaka mandray mpitsidika 4,000 ary tsy latsa-danja noho ny rendrarendra. Misy trano fisakafoanana, bistro, bar, ary ploschadka-lalao an-kalamanjana ambonin'ilay farihy mahafinaritra. Izy io dia iray amin'ireo trano filokana malaza indrindra sy maoderina any Eropa.
Toetran 'i Vienna
Opera Vienna. Toerana: Viena, Opernring, 2. Miavonavona i genius amin'ny talenta mozika - Mozart, noho izany ny fitsidihana ny "Opera Vienna" dia tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny lisitry ny fisarihana mandinika tsy maintsy atao;
Trano Hundertwasser. Toerana: Viena, Untere Weissgerberstrasse, 13. Amin'ity adiresy ity dia ho hitanao ny iray amin'ireo trano mihoa-pampana indrindra any Aotrisy.
Tranombakoka Sigmund Freud. Toerana: Vienna, Berggasse, 19. Aza hadino ny mitsidika ny tranombakoky ny mpahay siansa malaza. Any no hilazana anao tsy ny fiainana ihany fa ny fampiharana psychotherapeutika koa. Ny fananganana ilay psychoanalyst lehibe dia niaina efa ho 47 taona.
Vienna Woods. Toerana: Viena, Wienerwald. Reraka amin'ireo arabe be olona any Wina ianao, dia afaka miala sasatra foana ao amin'ny zaridaina tsara tarehy.
Museum "History of Art". Adiresy: Burgring 5. Eto dia hiseho ireo sary hosodoko nosoratan'ireo tompona toa an'i Titian, Raphael, Vermeer ary mpanoratra hafa, ary koa sary sokitra sy vakoka samihafa.
Zavatra mahaliana momba an'i Aotrisy sy ny Aostralianina
Ny mponina dia 8, olona 4 tapitrisa, 90% miteny alemà;
Noho ny itovizan'ny anarana dia matetika no mampifangaro an'i Aostralia amin'i Aostralia. Noho izany dia fahatsiarovana be mpitia izy io “Aostralia: tsy misy kangaroo”;
Io no firenena tokana ahafahan'ny fifidianana ho an'ny vahoaka 19 taona, fa tsy 18;
Ny farihin'i Gruner dia manafina zaridaina tena izy - amin'ny ririnina dia 1-2 metatra monja ny halaliny, fa aorian'ny tondra-drano amin'ny rano mitsonika lasa 12 metatra;
Ao Aotrisy, toy ny any Alemana, ao anaty sauna, dia mandroaka lehilahy sy vehivavy ao amin'io efitra io;
Maherin'ny antsasaky ny lehilahy mipetraka any Okraina no be loatra;
Ity firenena ity dia nonenan'ny Mozart, fa koa i Haydn, Schubert, Liszt, Strauss, Mahler, Bruckner.
Aotrisy eo amin'ny sarintanin'i Eoropa
0.1 Gambling an-tserasera ao Aotrisy
0.2 Lisitry ny Top 10 aotrisianina Online Casino Sites
2.1 Ny site casino amin'ny Internet dia manaiky mpilalao avy any Aotrisy
3.0.1 Toerana misy an'i Aostralia sy fohy ara-tantara
3.1 Casinos sy ny filokana ao Vienne
3.1.1 Ireo casinos malaza indrindra any Aotrisy
3.1.1.1 Bad Gastein - tanàna atsimon'i Salzburg
3.1.3 Toetran 'i Vienna
3.1.4 Zavatra mahaliana momba an'i Aotrisy sy ny Aostralianina
3.1.5 Aotrisy eo amin'ny sarintanin'i Eoropa